Voarohirohy tamin’ny fanafihana teny Mahitsy: efa nigadra teny Tsiafahy, mbola naverina ho Zandary | NewsMada
Par Taratra sur 23/02/2019
Afaka tamin’ny raharaha fanafihana teny Mahitsy ilay zandary voasambotra, voalaza fa voarohirohy amin’ilay fanafihana nahafaty ilay metisy Sinoa, ny 9 feboroary lasa teo. Tsy afaka kosa anefa tamin’ny raharaha fanafihana nahatafiditra azy teo aloha, ahiana ho mifono kolikoly.
Nanamafy ny Seg, ny Jly Ravalomanana, raha nanontanian’ny mpanao gazety, fa tratra ilay olona nitovy tamin’ny tratra tao anaty “camera” fanaraha-maso ka voaporofo fa tsy ilay zandary voalaza io. Na izany aza, misy ny fanadihadiana misokatra momba azy io satria efa tafiditra tamin’ny raharaha fanafihana nitranga teny By Pass izy io, ny taona 2013, ary nalefa teny Tsiafahy. “Nalefa eny amin’ny “pôle anti-corruption” ny fanadihadiana azy satria mampanahy ny nahatafoavaka azy teny Tsiafahy kanefa niverina ho zandary ihany. Inona ny antony tsy nahavoaroaka azy? Eo ihany koa ny ahiahy amin’ny harena mihoa-pampana ananany, toy ny fiara 4×4, ny moto, sns”, hoy ny Jly Ravalomanana.
Araka izany, mampanahy hatrany ny momba ilay zandary voarohirohy amin’ny asan-jiolahy ity. Efa afaka tamin’ny fanafihana teny Mahitsy aloha ny tenany. Na izany aza, efa anisan’ny jiolahy noho ny fanafihana ihany. Andrasana, araka izany, izay vokatry ny fanadihadiana avy amin’ny sampandraharaha miady amin’ny kolikoly. Raha ny fizotry ny raharaha mantsy, misy indray koa ireo tompon’andraikitra mety ho tafiditra amin’ny resaka kolikoly ka nampiverina ity zandary efa nigadra ity, ho afaka nanao ny asany ihany.
Mahazo vokatra ny zandary
Manoloana ny fahataran’ny zandary rehefa misy ny antso vonjy atao amin’izy ireo, nanazava ny Jly Ravalomanana fa efa misy ny fanadihadiana mandeha. “Amin’ny ankapobeny aloha, fantatra fa noho ny tahotra, na koa miray tsikombakomba amin’ny jiolahy, ny mahatonga ny zandary tara amin’ny antso atao amin’izy ireo raha misy ny fanafihana. Efa misy ny fepetra raisina amin’izany, ary anisan’izany ny nanatsoahana ireo zandary roa lahy teny Mahitsy”, hoy ny fanazavana.
“Misy ihany koa anefa ny vokatra azo”, hoy ny fanamafisana eo anivon’ny zandary. Anisan’izany ny fahatrarana ny atidoha amin’ny kidnapping, ny nahatafaverenana omby 300 tany Mahajanga, ny nahafaty ireo jiolahy teny Itaosy farany teo.
Efa misy koa ny fanadihadiana momba ny filazana fa misy mikasa hanao fanafihana any amin’ny faritra Imerimandroso, Ambatolampy Tsimahafotsy ary Ambohimanga.